လုံခြုံရေး, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းကမ်းလွန် & ဘယ်အရာကိုရှာ၏သီးသန့်လုံခြုံရေး
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး & လုံခြုံရေး
ကမ်းလွန်ဘဏ် ကိုသာအလွန်အမင်းချမ်းသာကြွယ်များအတွက် reserved စိတ်ကူးတစ်ခုတူနေတယ်။ သမ္မာတရားကိုပျမ်းမျှလူတစ်ဦးကြောင့်ဖြစ်ယုံကြည်သည်ထက်ကအများကြီးပိုလုံခြုံလွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်လူတွေကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းကမ်းလွန်ဘဏ်တွေအကြောင်းကဘာလဲ? သငျသညျအဖြေကိုသုတေသနသည့်အခါကောင်းပြီ, သင်ကသင်ထင်လိမ့်မယ်သကဲ့သို့မရှုပ်ထွေးကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းကျော်အများအပြားအားသာချက်များကိုဆက်ကပ်။ အတော်များများကကမ်းလွန်ဘဏ်များရဲ့ privacy နဲ့ပြည်တွင်းဘဏ်များလုပ်ပေးထက် သာ. ကြီးမြတ်ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးတက် သာ. ကြီးမြတ်သည်လုံခြုံရေးကိုဆက်ကပ်။ ဒီအထောကျအကူပွုအရင်းအမြစ်အချို့အကြံပေးချက်များ, အရိပ်အမြွက်နှင့်ဤအခွင့်အလမ်းအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်တကွသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းကအသံပဲကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာငွေထုတ်၏နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာတည်ရှိပြီးသောတီအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းရုံထိုကဲ့သို့သောဘေလီဇ်, အ Cayman နှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အဖြစ်သေးငယ်တဲ့လူအမျိုးမျိုးကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်။ ဒါဟာအစအခြားသူတွေအကြားဆွစ်ဇာလန်, နယ်သာလန်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအပါအဝင်ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်နှင့်ဥရောပလူအမျိုးမျိုးအဖြစ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံက၎င်းတို့၏ဘဏ်များလုပ်ကိုင်ပုံကိုအုပ်ချုပ်ကြောင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများရှိပါတယ်။ အဆုံး၌ကား၎င်းတို့သည်အလွန်ဆင်တူသောအရာတို့ကိုပြီးမြောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဤသည်ဘဏ်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအာမခံထားကူညီပေးသည်တဲ့စည်းမျဉ်းပတ်ဝန်းကျင်ပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကမကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေထွက်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးမည့်ကြောင့်-လုံ့လဝီရိယ system ကို employ ။
ထိုမေးခွန်းကိုအဖြေဟုတ်ကဲ့တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့အများကြီးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်များ၏အရေးအပါဆုံးနှင့်အများဆုံးတန်ဖိုးအကြိုးခံစားခှငျ့တစ်ခုမှာသီးသန့်တည်ရှိမှုသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, ဥပမာ, ထိုကဲ့သို့သော 1970 ၏အမေရိကန်ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေအဖြစ်ဥပဒေများရှိပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်မျိုးချစ်အက်ဥပဒေရောက်လာတယ်။ သူတို့ကရှာတွေ့ဖို့အားလုံးကိုပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာအလွန်လွယ်ကူစေပါသည်။ ဒါကဒေသခံဘဏ်များအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်း privacy ကိုနီးပါးလည်းမရှိခဲ့ချေစေသည်။
နိုင်ငံအများအပြားအတွက်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းဆန့်ကျင်ဘက်ထဲမှာ, ကိုင် privacy ကို အမြင့်ဆုံးနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏။ ထို့ကြောင့်များစွာသောတရားစီရင်မှုအတွက်ကမ်းလွန်ဘဏ်များဆိုတတိယပါတီများမှမှအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူအထောက်အထားတွေကိုကျော်ဖွင့်ရန်မတာဝန်အောက်မှာရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်ဝါဒ, မှောင်ခို, ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်တူလေးနက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအဖြစ်သင်တန်းအချို့ချွင်းချက်, ရှိပါတယ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက် privacy ကိုဒီအဆင့်ကိုတစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းစံသာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဥပဒေပြဌာန်းအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူတွေရဲ့ privacy နဲ့လျှို့ဝှက်ဥပဒေပြဌာန်းထားသည်သောနိုင်ငံအများအပြား၌မရှိ။ ဤသည်ကိုသူတို့အရပ်ဘက်တရားကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည်သောလူတို့အဘို့စံပြဖြစ်ပါတယ်။
2006 အတွက်အမေရိကန်ဘားအစည်းအရုံးအဆိုအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနေအိမ်ထက်ပိုတဲ့သန်းရှေ့နေများဖို့ဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင်, အရပ်ဘက်ဝတ်စုံ 12-1993 ထံမှ 2002% တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ယနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ကမ္ဘာ့ရှေ့နေများကအများစုရှိပါတယ်။ အထူးကမ္ဘာ့ရှေ့နေများ၏ 80% US မှာကျင့်သုံးပါ။ ဒါဟာအစက၎င်း၏တရားစွဲမှုအများစုရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ အမေရိကန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တရားစွဲမှုတစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 96% ရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာသဘာဝနှင့်လိုက်အောင်ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ကိုဦးစားပေးသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါစေ။
များစွာသောလူကိုသိသည့်အတိုင်း, တစ်ဦးနှင့်လိုက်အောင်တရားစွဲဆိုမှုကြောင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမမှန်သောဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင်အလေးအနက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဘဏ္ဍာရေးသာယာဝပြောရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတရားစွဲဆိုမှုအောင်မြင်သောသို့မဟုတ်မရှိမရှိကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ တတရားစွဲဆိုမှုခုခံကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာအခကြေးငွေသိသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကတရားစွဲဆိုမှုသွားစေရန်တရားစွဲဆိုခဲ့ဖို့ဘဏ္ဍာရေးအခြေချပစ်ရန်မကြာခဏစျေးနှုန်းချိုသာပါတယ်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားမရအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆိုးရှေ့နေများနှင့်လိုက်အောင်တရားစွဲမှုကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြသည်။ သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်နေထိုင်ရသောတထက်ကွဲပြားခြားနားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြ၏သာထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အလွန်တင်းကျပ်သော privacy ကိုဥပဒေများကိုဘဏ်တွေအုပ်ချုပ်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များကိုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် privacy များ၏အဆင့်ကိုအထူးသဖြင့်အရေးပါသည်။ ဤသည်ကိုသူတို့ရရှိခဲ့ပါပြီအရာတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များမှကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်တင်းကျပ်ဘဏ်လုပ်ငန်း privacy ကို၏ပေါင်းစပ်နှင့်ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲကြောင်းဥပဒေရေးရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်ဆောင်ရှိပါသည်။ အဲဒီနှစျခုအတားအဆီးသင်တို့တဘက်၌တရားစွဲမှုလိုက်စားအများအပြားရှေ့နေများကတားလိမ့်မယ်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရယူအတွက်အစွန်းရောက်အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ် "payday အခြေချနေထိုင်။ "
ဒါဟာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းကိုသာအောင်မြင်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်းပြချက်ကဒီဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုယျတိုငျကိုအကောင့်ကိုကြည်လျှင်, တရားသူကြီးတစ်ဦးကိုပြန်လည်သင့်ရဲ့ကမ်းလွန်အကောင့်မှရန်ပုံငွေများကိုရောက်စေဖို့သငျသညျအမိန့်တော်ရှိနိုငျပါသညျ။ ယင်းယူခြင်းသည်ကိုင်ပြီးအနက်ရောင်အင်္ကျီအတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်အမိန့်ပေးသည်ဆိုပါကသူပြီးတော့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင်သည်အတင်းအကျပ်စေနိုင်သည်။
သငျသညျဖို့အရေးကြီးတယ်တရားစွဲမှုကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလား? သို့ဆိုလျှင်ကျင်းပနိုင်ရန်တစ်ဦးလိုင်စင်ဂေါပကနှင့်အတူတစ်ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုအတွက်အကောင့်ရရှိထားသူမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးလိုင်စင်, အာမခံထား, ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဂေါပကများကစောင့်ကြပ်သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို၏အတွင်းပိုင်းရန်ပုံငွေများ, ကိုင်ထားသည်။ သငျသညျအဲဒီလိုအခါသင်ကျောက်ပြားကိုဖွင့်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂေါပကကမ်းလွန်နေထိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒေသခံတရားသူကြီးလိုက်နာရန်နိုင်ငံခြားဂေါပကအတင်းအကျပ်ဖို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
တိုးမြှင့် privacy ကိုအပြင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလည်းပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်လုပ်ပေးထက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ပေး။ ပြည်တွင်းအကောင့်အချို့စည်းစိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုအတွက်ပါဝငျထံမှသင်တို့တားမြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်များစွာသောကမ်းလွန်ဘဏ်များသည်ဤအကျိုးအမြတ်နှင့်အကျိုးရှိသောဘဏ္ဍာရေးအခွင့်အလမ်းများဖွင့်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဤအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကမ်းလွန်ဘဏ်များနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်ရရှိနိုင်ပါသည်တဦးတည်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ ဒေသအတော်များများအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းရေးရာများတွင်သိသိသာသာလျော့နည်းအစိုးရဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်မှတဆင့်သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာရန်ပုံငွေများအသုံးချဖို့၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးအတွက်ဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Plus အားသငျသညျသူတို့အားငွေကြေးများအတွက်ပိုကောင်းလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုရရှိနိုငျသညျ။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပိုင်ဆိုင်အချို့သောတရားစီရင်မှုအတွက်ရရှိနိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများဖွင့်ဖွင့်လှစ်။ ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းထွန်းသစ်စစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုလွယ်ကူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသူတို့ပြည်တွင်းမှာခံယူနိုင်သည့်အရာကိုထက်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်ပိုကောင်းတဲ့ပြန်လာလက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။ အချို့သောကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာနောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ ဒါကစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အစုစုနှင့် / သို့မဟုတ်အဖိုးတန်သတ္တုများကိုကိုင်ပြီးပါဝင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မကြာခဏဆိုသလိုသူတို့ရဲ့အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူအားပူဇော်ပိုပြီးအဆင်သင့်အတိုးနှုန်းအဲဒီမှာကိုဆက်ကပ်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ရှိခြင်းထံမှလာသည်ဟုနောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုတရားစီရင်မှုအတွက်ဘဏ်များကအရမ်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုငါအခုသင်စဉ်းစားစေခြင်းငှါအဘယ်သို့သိနိုင်: "ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သမျှသောကွောငျ့ဖွစျသညျ?" ဒီကိစ္စကို၏လွင်ပြင်အမှန်တရား 2008 နှင့် 2012 အကြား, ပျက်ကွက်ကြောင်း 465 အမေရိကန်ဘဏ်များရှိကြ၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးနေဖြင့်လတ်တလောနှစ်ပတ်လည် In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒီတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၏ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း 50 လုံခြုံဆုံးဘဏ်များ သုံးဦးသာ (3) ကိုအမေရိကန်ဘဏ်များမှစာရင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တဦးတည်းကိုအမေရိကန်ဘဏ်ထိပ် 30 လုံခြုံဆုံးဘဏ်များအတွက်ပင်မျှမရှိ။ မဟုတ်တဦးတည်း။ ဤစာရင်းတွင်အဆိုအရကမ္ဘာပေါ်မှာထိပ်တန်း 10 လုံခြုံဆုံးဘဏ်များအားလုံးဥရောပ၌တည်ရှိသောခဲ့ကြသည်။
ယခုဤသည်အမေရိကန်ဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်း imploding ၏ခါနီးပေါ်ကြောင်းပြောပါသည်မဟုတ်။ ဒါကစီးပွားရေးပြိုလဲထောင့်လှည့်ပတ်သေချာပေါက်ပိုင်ခွင့်မရှိ, ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစာရင်းဇယားရိုးရှင်းစွာအမေရိကန်မထက်ပိုဘဏ်လုပ်ငန်းတည်ငြိမ်မှုများကိုကမ်းလွန်နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်ဖော်ပြသည်။ ဤသည်ပိုမိုအားကောင်းချိန်ခွင်လျှာစာရွက်များလိုအပ်ကြောင်းဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများမှတဆင့်မကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ Plus အားဤအအဖွဲ့အစည်းများအများအပြားကိုင်ဆောင်သူအကောင့်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ခင်းကျင်းဘို့ပေးပိုကောင်းပြန်ဆက်ကပ်။ တည်ငြိမ်မှု၏ဤအဆင့်ကိုအကောင့်ကိုကိုင်ဆောင်သူ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမျိုးစုံမှခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအစကသူတို့ကိုပိုကောင်းသူတို့အားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူအများစုအနေနဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ရတဲ့တစ်ဦး, ရှည်လျားခက်ခဲကြမ်းတမ်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင်းကိုစိတ်ကူးရှိသည်။ သူတို့ကသာအနည်းငယ်အဘို့သိုထားခြင်းဖြစ်သည်ထင်; ကမ်းလွန်အကောင့်ဖွင့်တင်ထားရန်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းရှေ့နေများနှင့်အခကြေးငွေပေးချေရန်တတ်နိုင်သောသူတို့အဘို့။ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့် setting ဆိုးရွားလှသောဥပဒေခက်ခဲခဲ့ကြသည်သောအခါဤစကားမှန်ဆယ်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ခဲ့ကြပေမည်။ ထို့အပြင်သူတို့ကြောင့်ဘဏ်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်းမှစျေးကြီးရှိကြ၏။ သို့သော်ထို့နောက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်မွေးဖွားခြင်းနှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ကွန်ပျူတာများအသုံးပြုခြင်းရောက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်ယနေ့ရယူနှင့်စောင့်ကြည့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့် operating အဖြစ်နီးပါးအဖြစ်လွယ်ကူပါတယ်။
ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အသက်အရွယ်ခုနှစ်တွင်ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီ introducer ဆက်သွယ်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များ၏သီးသန့်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဒါဟာ thusly မည်သူမဆိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ရှိရာတစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးထားသည်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုမဆိုလူတစ်ဦးရှေ့နေများမှမတန်တဆဥပဒေရေးရာနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေပေးဆောင်စရာမလိုဘဲအကောင့်တစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ပါတယ်။ Plus အားအများအပြားတရားစီရင်မှုအတွက်ကမ်းလွန်ဘဏ်များ၏တည်နေရာကိုခရီးသွားလာရန်လိုအပ်ချက်မရှိ။ ကမ်းလွန်ဘဏ်များသည်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုယခုအကြောင်းကိုလူတိုင်းပိုပြီးသုံးစွဲနိုင်ကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်တဦးတည်းထင်စေခြင်းငှါထက်အကျိုးကျေးဇူးများအသီးအနှံကိုရိတ်ရရန်ဝေးပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အတိတ်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကျော်တွေအများကြီး mystique ကဝိုင်းပါပြီ။ ပျမ်းမျှလူတဦးဘဏ်များတစ်ဦးချင်းစီကသာအချမ်းသာဆုံးဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုကြိုတင်ယူထားသည်ဟုယုံကြည်သည်။ ကဲ့သို့သော, သူတို့ကအလားအလာလုံးအကျိုးအမြတ်ကိုသာအခြားသူတစ်ဦးအဘို့ဖြစ်ကြ၏ရိပ်မိရ။ ဒါကကျနော်တို့သစ္စာကိုဖျက်ဖြစ်ပါသည်ပြည်နယ်မှပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းဦးတည်းယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့အဘို့အကြိုးခံစားခှငျ့လည်းရှိပါတယ်။
privacy ကို, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းများတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အကျိုးကျေးဇူးများလူတိုင်းမှရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျသူ၏စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရှာနေသူတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များမှာပါသလား? သငျသညျနိုင်ငံခြားစျေးကွက်အကျိုးအမြတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုသို့ဝငျလိုလားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသလား ဒါကြောင့်ပါလျှင်များစွာသောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကျွမ်းကျင်သူများပြင်းပြင်းထန်ထန်အနေနဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ရယူသို့ကြည့်မျှော်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်း privacy နဲ့လုံခြုံရေးကိုအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်နှင့်သင့်ပိုက်ဆံအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြောင်းဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ OffshoreCompany.com မှန်မှန်ဗဟိုဘဏ်စနစ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြောင်းဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအကြံပြုသည်။ အဆိုပါစနစ်အားမြင့်မားစညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒေသခံကမ်းလွန်ဘဏ်များများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်လွတ်လပ်သောကြီးကြပ်ထောက်ပံ့ပေးသောတင်းကြပ်စာရင်းကိုင်အလေ့အကျင့်, အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော။
အတော်များများကအဖွဲ့အစည်းများအမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံခြားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ဒေသခံအစိုးရအရာရှိများမှလုံခြုံနှင့်ပုဂ္ဂလိကကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုပေး။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများအလုပ်အကိုင်များကိုဒေသခံစီးပွားရေးကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဒါကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင်အပေါ်မူတည်သည်။ ရလဒ်အဖြစ် privacy နဲ့ဘဏ္ဍာရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေများဟာကာလကြာရှည်နှင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအားလုံးအလားအလာ clients များတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ညာဘက်ရွေးချယ်မှုစေအရေးကြီးသည်။ ကျနော်တို့ထိပ်ဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပေးသူအများအပြားအပေါ်ကျယ်ပြန့်သုတေသနလုပ်ဆောင်။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့အလျော်သောရွေးချယ်မှုကိုအောင်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေသတင်းအချက်အလက်နှင့်တကွသင်ပေးဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏။
အချို့နိုင်ငံများရှိကမ်းလွန်ဘဏ်များပြဌာန်းဘဏ္ဍာရေးကာကွယ်မှုအာမခံစနစ်များပါဝင်ရန်။ သူတို့ဟာအလွန်အလေးအနက်ထားလုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုယူပါ။ အားပြိုင်မှုတင်းကြပ်စွာပြဋ္ဌာန်းရန် ကမ်းလွန်ဘဏ်လုံခြုံရေး။ သူတို့ကပြင်းထန်စွာအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုပြဋ္ဌာန်းရန်။ အကြောင်း, သတင်းအချက်အလက်ဘဏ်များနိုင်ငံခြားအစိုးရများအပါအဝင်တတိယပါတီများ, အတူမျှဝေဖြစ်သောပညတ်တရားကန့်သတ်သည်။ သဘာဝကျကျ, ဥပဒေများကိုပြင်းထန်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ကိစ္စများတွင်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပံ့ပိုးပေးခွင့်ပြုသည်။ သူတို့ကပေါ့ပေါ့တန်တန်ဘဏ်လုပ်ငန်း privacy ကိုမယူကြဘူး။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဥပမာ, ပညတ္တိကျမ်းပြင်းထန်စွာဖောက်သည်တစ်ဦးရဲ့ privacy ကိုချိုးဖောက်မဆိုအလုပ်သမားအပြစ်ပေး။ ဒီအတောင့်တင်းဒဏ်ငွေနှင့်ထောင်ဒဏ်အချိန်ပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအရမ်းအလေးအနက်ထားငွေထုတ် privacy ကိုယူပါ။ ဒါဟာနိုင်ငံခြားဘဏ်ပြည်တွင်းနျဌာနခှဲရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းလည်းအရေးကြီးပါသည်။ နိုင်ငံခြားဌာနခွဲပိုက်ဆံတက် coughs သည်အထိပြည်တွင်းဌာနခှဲကဒဏ်ငွေအကြောင်းမဲ့နိုင်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘဏ်တွေဘေးကင်းလုံခြုံမှု, လုံခြုံရေး, အွန်လိုင်း access ကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ရှိသည်နှင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နိုင်ငံခြား clients များလက်ခံ? ဒါကဒီတစ်ခုကဲ့သို့ကုမ္ပဏီအတွက်လာဘယ်မှာပါပဲ။ အကူအညီနဲ့ဘို့ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်အရေအတွက်ကိုသို့မဟုတ်ပုံစံကိုအသုံးပြုပါ။
channel ကျွန်းများ (ဂျာစီနှင့်ဂါဇီး)
OffshoreCompany.com ကမ်းလွန်ဘဏ်များနှင့်အတူကြာမြင့်စွာရပ်တည်မှုဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် In-လူတစ်ဦးအစည်းအဝေးများလုပ်ဆောင်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာကျနော်တို့ client များတည်ထောင်ရန်ကူညီသောကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွယ်ရှိလုံခြုံစွာဖြစ်ကြောင်းသေချာကူညီပေးသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ရောက်ရှိဖို့သို့မဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်ထဲမှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်။
> ကျအခနျး6မှ